OTU ESI ENWETA MGBỌRỌGWỤ NA BLUESTACKS - BLUESTACKS - 2019
Njirimara mgbọrọgwụ na BlueStacks
R-Crypto bụ usoro ihe omume maka ịmepụta disks dịpụrụ adịpụ na-eji AES-256 na AES-192 algọridim n'ọrụ ya.
Ihe nkesa diski
A na-emepụta mgbasa ozi ọma dị ka akpa na diski ike anụ ahụ.
Enwere ike itinye igbe dị otú ahụ n'ime usoro, mgbe nke a gasịrị, a ga-egosipụta ya na folda ahụ "Kọmputa".
Mgbe ị na-ekepụta diski ọhụrụ, nke zuru oke ma ọ bụ nke ọhụụ, encryption algorithm na-ahazi, akwụkwọ ozi na usoro faịlụ ahụ kpebisiri ike. Ọzọkwa na nhọrọ ị nwere ike ịkọwa na ọkwa dị na nchekwa "Kọmputa" ga-abụ ụgbọelu ahụ. Ọ bụrụ na ịhọrọ nha oge, mgbe ahụ, a ga-agụnye ya na listi arụmọrụ siri ike. N'ọgwụgwụ ikpeazụ, e mepụtara paswọọdụ ịnweta data.
Ikepụ onwe ya
R-Crypto na-enye gị ohere ịhazi njirimara na-akpaghị aka nke mgbasa ozi ọma. Onye ọrụ ahụ nwere ike ịhọrọ ọnọdụ nke a ga - arụ ọrụ a - nyocha, mgbanwe na ọnọdụ mkpuchi ma ọ bụ mkpọchi kọmputa, iwepụ nke mgbasa ozi nke nwere akpa kwekọrọ, oge adịghị arụ ọrụ na usoro ahụ.
Nkwado nzuzo na nchekwa paswọọdụ nke ihe nchịkọta nke usoro ahụ;
Ojiji na-abụghị nke azụmahịa.
Obere arụ ọrụ;
E nweghị nsụgharị Russia.
R-Crypto bụ usoro ihe omume nke nwere nanị otu ọrụ - okike nke diskipted diski diski. Ọ bụrụ na onye ọrụ ahụ echeghị ihe nchedo data ndị ọzọ, mgbe ahụ, a pụrụ iwere software a dị ka onye nyocha maka "ndụ" na-adịgide adịgide na usoro.
Download R-Crypto maka n'efu
DVDFab Mebere Okuku Mmemme iji encrypt nchekwa na faịlụ DAEMON Ngwaọrụ Pro Otu esi emepụta diski nke ọma na mmanya mmanya 120%
R-Crypto bụ mmemme nke na-enye gị ohere ịmepụta disks dịpụrụ adịpụ na ụdị akpa faịlụ site na iji ọtụtụ ntinye ama algọridim.
Onye Mmepụta: R-Tools Technology Inc.
https://termotools.com ig.termotools.com © Bluestacks 2019